InfluencerActive: Chọta ndị B2B na-emetụta ngwa ngwa maka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Na-esote Gị | Martech Zone
Taa, esonyere m karịa 100 ndị ọzọ B2B influencers na mwepụta nke Influencer nọ n'ọrụ. Nke a bụ mbụ ahịa ahịa dijitalụ B2B nke akara B2B ma ọ bụ B2C iji chọpụta ma were ndị na-eme ihe ozugbo. Selflọ ahịa ahịa onwe onye zuru ụwa ọnụ pụrụ iche n'ihi na ọ na-ejikọ ndị na-ere ahịa ahịa na ndị na-eme ihe ike bụ ndị wuru aha dị ịrịba ama na ntụkwasị obi dị na ọwa dị iche iche. Lọ ọrụ ahụ tọrọ ntọala site na Anthony James ("AJ"), Onye nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30 afọ nke ahịa ahịa na ya onwe ya bụ onye a ma ama na-emetụta ihe karịrị Ndị na-eso ụzọ 2 na LinkedIn.
Chọta Ndị Na-emetụta Ya Bụ Ihe ngema Aka
Maka ndị na-ere ahịa ụwa, ịchọta ezigbo ikike iji bulie akara a ma kwụọ ụgwọ nke ha chọrọ kemgbe ogologo oge na ahịa influencer, ọkachasị maka SMBs. Ọzọkwa, akara B2B ejedebeghi na ịpị ahịa azụmaahịa ma na-adaberekarị na nkwado ma ọ bụ mgbasa ozi nkwado, nke nwere ike ịdị oke ọnụ ma ghara ịdị irè. A na-eme atụmatụ ịba ụba ego na azụmaahịa mmetụta, mana ịchọta ezigbo ndị nwere ike ịbụ ihe ịma aka maka azụmaahịa.
Onye na-eme ihe ike nwere ike inyere aka kpalie mmetụta site na ịnye gị ahịa ọhaneze nke ndị na-eme ihe ike nwere ike ịmegharị. Ihe ikpo okwu:
Na-enye profaịlụ nke influencer yana onyinye ha - na ịnye ọnụahịa.
Ndị na - emetụta ya nwere ike ịnye onyinye gụnyere ịgụnye okwu, ngosipụta dịpụrụ adịpụ, mbọ ịre ahịa ọdịnaya, nkwalite mgbasa ozi mmekọrịta, ma ọ bụ ihe ọ bụla ha nwere inye.
Na-eme ka usoro ahụ dị mfe maka ndị na-ere ahịa B2B ịchọta ezigbo onye na-agbanwe ihe na ụlọ ọrụ ziri ezi n'ụzọ dị ọnụ ala iji kwadoo ụzọ ndụ ha na ụdị mgbasa ozi.
Democratizes na-enweta ohere nke ndị na-eme ihe ike ma na-enyekwa ụzọ nha anya iji nweta ma tinye ha na mba 11, US, Asia-Pacific, na Europe. Ọ na-enye nchikota nke mbụ jikọtara ọnụ nke nde mmadụ 30 + na ntanetị ruru 150+ nde mmadụ - ọnụọgụ na-eto kwa ụbọchị.
Na-enye nkwukọrịta sitere na ahịa na onye ọ bụla nwere mmetụta na usoro dị mfe maka ijikọta ha na mkpọsa ahịa ahịa iji bulie mmetụta.
Na-enye ebe mmepe ọhụụ maka ụlọ ọrụ MarTech site na ijikọ ndị na-eme azụmahịa (B2B) na ndị na-azụ B2B. N'oge gara aga, ndị na-eme ihe ike B2B enweghị ike azụmaahịa netwọkụ ha n'ihi mgbochi nke LinkedIn, yana naanị otu ụzọ onye nwere ike isi nweta mmetụta na LinkedIn bụ site na onyinye ndị dị ugbu a dịka atụmatụ InMail. Nkwado ederede na LI dị oke ọnụ ma ghara ịdị irè.
Nke kachasị mma, enweghị ụgwọ ndenye aha ma ọ bụ mkpa iji biputere obere okwu nke onye na-ajụ ajụjụ na-enyocha. Njikọ aka bụ kpọmkwem n'etiti azụmahịa na onye na-emetụta ihe, ma enwere ụgwọ naanị ma ọ bụrụ na onye na-emetụta ya kwenyere itinye aka.
Lelee profaịlụ na onyinye m na mmetụta Influencer
Tags: nchekwa data b2bahịa b2b influencerb2b ndị mmetụtachọta b2b influencerschọta ndị na-eme ihenchekwa data nchekwana-emetụta ihe